विश्वभर पेट्रोलको औसत मूल्य प्रतिलिटर १.४३ डलर पुग्यो, कहाँ छ सबैभन्दा सस्तो र महँगो ? « Bizkhabar Online
विश्वभर पेट्रोलको औसत मूल्य प्रतिलिटर १.४३ डलर पुग्यो, कहाँ छ सबैभन्दा सस्तो र महँगो ?
9 June, 2022 9:53 am
काठमाडौं । विश्वभर पेट्रोलको औसत मूल्य प्रति लिटर १.४३ अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो जुन ६ को तथ्यांक हो । यद्यपि, विभिन्न देशहरू बीच मूल्यहरूमा पर्याप्त भिन्नता छ । सामान्य रूपमा हेर्दा धनी देशहरूमा उच्च मूल्य छ भने गरिब देशहरू र तेल उत्पादन र निर्यात गर्ने देशहरूमा उल्लेखनीय रूपमा कम मूल्य रहेको छ ।
यसमा एउटा उल्लेखनीय अपवाद अमेरिका हो जुन आर्थिक रूपमा उन्नत देश हो तर, यहाँ इन्धनको मूल्य कम छ । विभिन्न देशहरूमा मूल्यहरूमा भिन्नताको कारण इन्धनमा लगाइएको विभिन्न करहरू र सब्सिडी रहेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको एउटै मूल्यमा सबै देशको पहुँच छ । तर, फरक–फरक कर तथा सब्सिडीका कारण खुद्रा मूल्य फरक छ ।
कच्चा तेलको मूल्य इन्धनकोको खुद्रा मूल्यको सबैभन्दा ठूलो आधार हो । हालै, डब्लुटीआई कच्चा तेलको मूल्य १२० डलर प्रति ब्यारेल माथि पुगेको छ । विश्वव्यापी तेल उद्योगमा, एक तेल ब्यारेल ४२ यूएस ग्यालनको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । जुन लगभग १५९ लिटर हो । यसले कच्चा तेलको मूल्य प्रति लिटरमा गणना गर्छ । खुद्रा मूल्यमा कर र अनुदान, प्रशोधन र ढुवानी लागत, कमिशन, आदि समावेश हुन्छन् ।
सूचीमा रहेका १७० देश÷क्षेत्रहरू मध्ये, ४५ देशमा मूल्य एक अमेरिकी डलरभन्दा कम छ । चौहत्तर देशमा १ देखि १.५० रहेको छ भने २५ देशमा १ देखि २ डलर र र २६ देशमा २ डलरभन्दा बढी छ । जसमा भेनेजुएलामा सबैभन्दा सस्तो मूल्य प्रति लिटर मात्र ०.०२ डलर, त्यसपछि लिबिया (०.०३१) र इरान (०.०५३) रहेको छ । शीर्ष १० सस्तो इन्धन उलब्ध हुने देशमध्ये एशिया र अफ्रिकामा चार देशहरू रहेका छन् । युरोप र दक्षिण अमेरिकामा एक–एक देश छन् । हङकङमा सबैभन्दा महँगो मूल्य २.८३ डलर रहेको र नर्वे दोश्रो स्थानमा छ ।
कतार शीर्ष १० धनी अर्थतन्त्रमा रहेको भएपनि मूल्य १ डलरभन्दा कम छ । युरोपेली राष्ट्रहरूमा मूल्य उच्च रहेको छ जहाँ चार देशहरूमा मात्र एक डलरभन्दा कम छ । रसियामा युरोपमा सबैभन्दा कम दर रहेको छ । ४७ मध्ये ४३ युरोपेली देशको मूल्य १ डलरभन्दा माथि छ । यो संख्या एसियामा ४० मध्ये २१, अफ्रिकामा ४३ मध्ये १२, उत्तर अमेरिकामा २४ मध्ये ३, दक्षिण अमेरिकामा १२ मध्ये ७ र ओशिनियामा ४ मध्ये शून्य रहेको छ । अनुवाद गरिएको